Imifanekiso eqingqiweyo ye-Coral Reef Wood yile Artist | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La ukhuni kunye neekorale bakude kakhulu omnye komnye ngokunxulumene neendawo abanokufumaneka kuzo. Kodwa ukuba siyazidibanisa ngohlobo lomfanekiso oqingqiweyo onje ngo-Joshua Abarbanel, uhlobo oluthile lokudibana kunye nobuhle benziwe bufanele ukukhankanywa nokudunyiswa kwimisebenzi yalo mkroli.
UAbarbanel uyayinyamekela hlanganisa amacandelo omthi ukwenza iingqaqa zekorale zibe yimifanekiso eqingqiweyo ekumgangatho ophezulu kakhulu kunye nomsebenzi omhle. Umzobi wenza iipateni kwikhompyuter ukuze aqhubeke nokusikwa kwelaser ukugqiba ukuhlanganisa isiqwenga sokugqibela esikhokelela kwimveliso enzima kakhulu njengoko kubonisiwe kwiindidi ezahlukeneyo ekwabelwana ngazo kule migca.
Njengokuba zeziphi iifom i-yin yang ekukhanyeni nasebumnyameni, Iikorale kunye neenkuni zenza isibini esihle kakhulu somdaniso ukuphumela kwimifanekiso eqingqiweyo ebonisa indlela amagama aphikisayo xa kusenziwa umsebenzi omkhulu kubo anikezela ngezi zinto zigqibeleleyo.
Nangona u-Abarbanel esebenzisa ubuchule be iteknoloji yekhompyutha Ukudlulisa imizobo ayenzayo ngengcinga yakhe yokusisa phambi kwentshukumo enkulu kunye nokusetyenziswa ngempumelelo kweethoni ezahlukeneyo zemithi eyahlukeneyo ayisebenzisayo. Umzobi okwangoku obonisa kwigalari yeVaranda e-Ojai, eCalifornia kude kube ngoMeyi 29, ke ukuba abanye babo basifundileyo bakufutshane, ungayeka ufumane ezi zixhobo zamatye zekorale zantlandlolo zinomthi njengemveliso.
Unayo I-instagram yakhe, facebook wakho y iwebhusayithi yabo for landela eminye imiboniso kunye nomkhondo oshiywe nguloo mfanekiso oqingqiweyo. Umsebenzi owenziwe ngomthi othi, nangona usebenzisa ikhompyuter ukusika i-laser, kufanelekile ukuba ukhankanywe kwisindululo uqobo.
Kwiveki ephelileyo sinamagqabi njengezinto ezizezinye iintlobo zemifanekiso eqingqiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo entle neyintsonkothileyo yamatye aselwandle eyenziwe ngomthi